यो वर्ष पढाएर परीक्षा लिइदैँन, सिकाएर मूल्याङ्कन गरिन्छ :निर्देशक भट्टराई - NewsCenterNepal.com
काठमाडौं- कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययनअध्यापन भइरहेको छ। अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, स्वाध्याय सामग्रीमार्फत पठन पाठन भइरहेको छ।असोज १ गतेबाट विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण अनुसार पठनपाठन भइरहेको छ। त्यसका लागि अहिलेको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरेर सजिलो बनाइएको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका र पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाले मूल्याङ्कनलाई नै जोड दिएको भन्दै त्यहीअनुसार अगाडि बढिने बताउनु भयो ।
“यो वर्ष पढाएर परीक्षा लिइदैँन। सिकाएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसकै आधारमा विद्यार्थीको कक्षोन्नति गरिनेछ” भट्टराईले बताउनु भयो।
वैकल्पिक विधिबाट सिकिरहेका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन के कसरी गर्ने भन्ने अन्योल रहेका बेला केन्द्रका प्रवक्ता समेत रहेको निर्देशक भट्टराईले परीक्षा नगरेर मूल्यांकनको आधारमा हुने बताउनु भयो।
उहाँका अनुसार शिक्षकहरुलाई तीन घण्टे परीक्षामा नअल्मलिन आग्रह गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट सिकेका विद्यार्थीलाई ५० भन्दा बढी तरिका अपनाएर मूल्याङ्कन गर्ने विधि पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचामा दिइनेछ।
अंकको अल्झनमा परेर ग्रेडिङ गर्नेभन्दा पनि विद्यार्थीले जानेको र उनीहरूले गरेका क्रियाकलापलाई आधार मानी शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“विद्यार्थीले पठ्यक्रमले निर्धारण गरेको कुरा सिके नसिकेको नै प्रमुख हुन्छ। त्यसका लागि विद्यालयमा विद्यार्थीलाई उपस्थित गराएर परीक्षा नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन्। मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, विधार्थीहरुले के सिके भन्नेबारे कसरी मूल्याङ्कन गरियो भनेर शिक्षकले प्रमाण राख्नुपर्नेछ। गृहकार्य गराएको हो वा परियोजना कार्य ? अथवा टेलिफोनबाट प्रश्न सोधिएको हो ? त्यसको प्रमाण शिक्षकले राख्नुपर्छ। त्यो नै कार्यसञ्चयिका हो। अनिमात्र त्यसले मान्यता पाउँछ।”
गृहकार्य, परियाजना कार्य, साना समूहमा विभाजन गरी प्रश्न राख्ने, टेलिफोनमार्फत् सोध्ने, अनलाइन प्रविधिजस्ता विधिबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरिने बताउनु भयो।।
विद्यालयले गर्ने मूल्यांकनको पालिका स्तरबाट निगरानी, सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन हुने व्यवस्था गरिएको छ। “मूल्याकन गर्नका लागि दुई किसिमको समिति बनाएका छौं। एउटा व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत रहन्छ। भने अर्को स्थानीय तहअन्तर्गत रहेर समिति बनेका छन्। ती समितिहरूले शिक्षकले गरेको मूल्यांकनको सुपरिवेक्षण गर्नेछन्।”
विगतका वर्षमा तीन घण्टाको परीक्षाका आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिँदै आएको थियो। तर, यो वर्ष त्यो सम्भव छैन्। यदि कुनै विद्यालयले विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थिति गराएर परीक्षा लिन सक्छ भने त्यसलाई पनि नकार्न नसकिने निर्देशक भट्टराईले बताउनु भयो।।
कक्षा ८ को परीक्षा भने पालिकास्तरमा हुन्छ। त्यस्तै कक्षा १० को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा हुन्छ। त्यो बाहेकका परीक्षा विद्यालयले नै मूल्याङ्कनकाआधारमा गर्न सबैलाई अनुरोध गर्नु भयो ।
“शिक्षकहरू वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणमार्फत परीक्षा गर्न सकिदैँन भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा उपस्थित गराएर मात्र परीक्षा लिनुपर्छ भन्ने छैन्।
महामारीको जोखिमका कारण लकडाउन भएससँगै चैतबाट देशभर विद्यालय बन्द भएका थिए। २०७७ असार १ बाट वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा स्वाध्याय सामग्रीमार्फत् सिक्दै आएका छन्।उक्त निर्देशिकालाई संशोधन गरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार असोज १ गतेबाट पठनपाठन भइरहेको छ।